'Vashanduki: Iyo Muvhi' iri Kudzoka Kumatambo e2 Nights yekupemberera yayo 35th Anniversary - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Iyo Shanduko: Iyo Bhaisikopo' iri Kudzoka Kumatambo e2 Nights yekupemberera yayo 35th Anniversary
'Iyo Shanduko: Iyo Bhaisikopo' iri Kudzoka Kumatambo e2 Nights yekupemberera yayo 35th Anniversary
Autobots, Buda kunze! Asi, Zvishoma nezvishoma Tine Arthritis
by Trey Hilburn III September 13, 2021 363 maonero
zvakanaka, Shanduko iri pano kutirangaridza nezvekufa kwedu uye kuti isu tiri kukwegura. Vanoshandura: Iyo Bhaisikopo iri kudzoka kumitambo yekupemberera makore makumi matatu nemashanu yehusiku husiku hwakakosha chete. Iyo Fathom Zviitiko shindig iri kudzoka kugirazi hombe kuputika Decepticon butt uye kuti tiite kuchema kunge isu tiri vana vadiki kwese zvakare.
Mutsara we Vanoshandura: Iyo Bhaisikopo inoenda seizvi:
“Kwemakumi emakore, magamba Autobots, achitungamirwa naOptimus Prime (Peter Cullen), anga achirwa neve Decepticons vakaipa, vachitungamirwa naMegatron (Frank Welker). Sezvo kurwa pakati peAutobots neDecepticons kuri kukakavara paPasi, kutyisidzira kwakatonyanya kukura. Unicron (Orson Welles, Citizen Kane), nyika yakakura inoshandura iyo inodya zvese zviri munzira yake, iri kuenda kuCybertron kunodya nyika yeTransformers nekupukuta maAuto neDecepticons kubva pakuvapo. Iyo chete tariro ndeye Autobot Matrix yeUtungamiriri. Nevavengi vatsva vanovavhima uye nenjodzi dzakavanda mukona dzese dzeboka renyeredzi, maAutobot anotora basa rine njodzi rekuponesa nyika yavo inozochinja mugumo wavo nekusingaperi. ”
Iyi bhaisikopo yaive yakakura kwazvo semwana. Izvo zvaive zvakare zvinoparadza zvachose uye pakanga pasina bhizinesi kugumbusa kunze chizvarwa chese chevana. Ndiri kureva, uyu akabuda achizungunuka uye akabva aratidza kuti kwaizove kwakaomarara uchienzaniswa neshoo. Spoilers, yakauraya vatambi venguva yakareba willy-nilly.
Unogona pre-odha yako matikiti chaipo HERE kweusiku hukuru hukuru huchiitika musi waGunyana 26 na27. Tarisa zvinyorwa panzvimbo yekubatanidza kuti uone kana iri kutamba munharaunda mako.
Wakachema here sezvatakaita panguva iyi Vanoshandura: Iyo Bhaisikopo?